सपनामा देखिएको सम्भोगको अर्थ यस्तो ! « OSBreak
सपनामा देखिएको सम्भोगको अर्थ यस्तो !
हरेक मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । सपनाको प्रकृति भने फरक–फरक हुन्छन् । उसो त हरेक मानिसले हरदिन फरक–फरक प्रकृतिका सपना देख्ने गर्छन् । जीवनको अनुभव, असफल काम, चाहना, आफ्नो जीवनमा परेका दुःखद घटना आदिका आधारमा मानिसले सपना देख्ने गर्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
कहिलेकाहीँ मानिसले कसैसँग शारीरिक सम्पर्कमा रहँदै गरेको पनि सपना देख्ने गर्छ । प्रायः युवाअवस्थामा यस्तो सपना देखिने गर्छ । जसलाई ‘नाइट फल’ पनि भनिन्छ । यस्तो सपनाले के संकेत गर्छ त रु एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री:
काठमाडौँ, स्वयंभूनाथ काठमाण्डू नगरको पश्चिममा एउटा उचाई भएको ठाउमा रहेको प्राचीन बौद्ध स्तूप हो। बौद्ध
नेपालको गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला म्याग्दे गाउँपालिका ३, किलचोकमा अवस्थित श्री अकलादेवीको महिमा बखान गर्दा